ပွနျလညျဖှငျ့လှဈလိုကျသညျ့ တက်ကသိုလျ၊ကောလိပျမြားသို့ ကြောငျးအပျသူ၄၀၀၀ကြျောရှိကာတကျရောကျသူ၂၀၀၀ကြျောရှိ | Popular
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၂၂ခုနှဈ ဇနျနဝါရီ ၆ရကျနကေ့စပွီး နိုငျငံအတှငျး ပွနျလညျဖှငျ့လှဈလိုကျသညျ့ တက်ကသိုလျ၊ဒီဂရီကောလိပျနှငျ့ကောလိပျမြားသို့ ကြောငျးလာအပျသူအရအေတှကျ ၄၄၀၉ ဦးရှိခဲ့သညျဟု ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ယနေ့ ဇနျနဝါရီ ၁၄ရကျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျပွောသညျ။
လကျရှိကြောငျးတကျနသေူမှာ ၂၂၈၁ဦးရှိကွောငျးလညျး ပွောသညျ။.
စာရငျးရှိ ကြောငျးသား၊ကြောငျးသူ အရအေတှကျမှာ ၁၉၇၄၀ဦး ရှိ၍ ၇၅ရာခိုငျနှုနျးကြျော ကြောငျးမတကျသညျကို စာရငျးအရသိရသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၂၁ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၁ရကျနကေ့ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈလိုကျသညျ့ အခွခေံပညာကြောငျးမြားသို့ ကြောငျးအပျသူ ၅.၂သနျးကြျော၊ကြောငျးတကျသူ ၄.၂သနျးရှိပွီး ဇနျနဝါရီ ပထမအပါတျအတှငျး ပညာသငျနှဈဝကျစာမေးပှဲသို့ ဖွဆေိုသူ ၄.၁သနျးကြျောရှိသညျဟုလညျး ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ထညျ့သှငျးပွောဆိုသညျ။
စာရငျးရှိ အခွခေံပညာကြောငျးသား၊သူအရအေတှကျမှာ ၁၀သနျးကြျောရှိ၍ အခွခေံပညာကြောငျးမြားသို့ ကြောငျးတကျရောကျမှု မရှိသညျ့ အရအေတှကျမှာ ၅သနျးကြျောရှိသညျဟု စာရငျးအရသိရသညျ။
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်များသို့ ကျောင်းအပ်သူ၄၀၀၀ကျော်ရှိကာတက်ရောက်သူ၂၀၀၀ကျော်ရှိ
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၆ရက်နေ့ကစပြီး နိုင်ငံအတွင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် တက္ကသိုလ်၊ဒီဂရီကောလိပ်နှင့်ကောလိပ်များသို့ ကျောင်းလာအပ်သူအရေအတွက် ၄၄၀၉ ဦးရှိခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၄ရက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်။
လက်ရှိကျောင်းတက်နေသူမှာ ၂၂၈၁ဦးရှိကြောင်းလည်း ပြောသည်။.
စာရင်းရှိ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ အရေအတွက်မှာ ၁၉၇၄၀ဦး ရှိ၍ ၇၅ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကျောင်းမတက်သည်ကို စာရင်းအရသိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့က ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် အခြေခံပညာကျောင်းများသို့ ကျောင်းအပ်သူ ၅.၂သန်းကျော်၊ကျောင်းတက်သူ ၄.၂သန်းရှိပြီး ဇန်နဝါရီ ပထမအပါတ်အတွင်း ပညာသင်နှစ်ဝက်စာမေးပွဲသို့ ဖြေဆိုသူ ၄.၁သန်းကျော်ရှိသည်ဟုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ထည့်သွင်းပြောဆိုသည်။
စာရင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းသား၊သူအရေအတွက်မှာ ၁၀သန်းကျော်ရှိ၍ အခြေခံပညာကျောင်းများသို့ ကျောင်းတက်ရောက်မှု မရှိသည့် အရေအတွက်မှာ ၅သန်းကျော်ရှိသည်ဟု စာရင်းအရသိရသည်။
ဇနျနဝါရီလအတှငျး ဗဟိုဘဏျက စတုတ်ထအကွိမျမွောကျ အမရေိကနျဒျေါလာ၁၀သနျး ထပျမံထုတျရောငျး